Defy the military junta and defeat its fascist rule! Stand with the Burmese peoples! | အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံပြီးယင်းတို့၏ဖက်စစ်ဥပဒေများကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်သည်။မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူအတူရပ်တည်သွားမည်။ – People’s Coalition on Food Sovereignty
Defy the military junta and defeat its fascist rule! Stand with the Burmese peoples! | အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံပြီးယင်းတို့၏ဖက်စစ်ဥပဒေများကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်သည်။မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူအတူရပ်တည်သွားမည်။
February 24, 2021 January 25, 2022
PCFS statement on the Burma Day of Solidarity, 24 February 2021
The People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS) salutes the continuing defiance of tens of thousands of Burmese peoples against the military coup that ransacked their democracy.
Fight for democracy! Resist the military dictatorship!
Stand with the Burmese peoples!
PCFS ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ကြေညာချက်
ပြည်သူ့စားနပ်ရိက္ခာအချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (PCFS) သည် သောင်းနှင့်ချီသောမြန်မာပြည်သူများအား ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်ဆီးသည့် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေခြင်းကို လေးစားဂုဏ်ပြုပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်က အစိုးရအားထိန်းချုပ်မှုကို သိမ်းပိုက်ပြီးသုံးပတ်အကြာတွင် လူထုအခြေပြုနာခံမှုမရှိခြင်းလှုပ်ရှားမှု CDM သည်အင်အားနှင့်အရေအတွက်သည် တိုးများလာခဲ့သည် – မကြာသေးမီက သမိုင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သော တိုင်းပြည်၏ပြည်သူလူထု၏လှုပ်ရှားမှုအတွက် ထူးခြားသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ လူလေးဦးထက်ပိုပြီး စုဝေးခြင်းကိုတားမြစ်ထားပြီး တင်းကျပ်စွာညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်သည့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းခဲ့သော်လည်း ယနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသည့်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ပွဲသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ တွင် ၃၂၅ ခု၌ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
PCFS သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်စတင်ခဲ့သော “၂၂၂၂၂ − ၂ငါးလုံး / နွေရာသီတော်လှန်ရေး” သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်မှုကို လုံးလုံးလျားလျားထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ဖိနှိပ်မှုတွေလည်း ပြင်းထန်လာမှုနှင့်အတူ မြန်မာပြည်သူတို့၏ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သည့်အားအင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။
ပြည်သူ့စားနပ်ရိက္ခာအချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် အာဏာသိမ်းမှုစတင်ကတည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ဆန္ဒပြသူလေးဦးသေဆုံး၊ လူ၇၀၀ခန့်ဖမ်းဆီးခံရပြီး ရာပေါင်းများစွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခွင်းမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သော မန္တလေးပဋိပက္ခနောက်ပိုင်း သွေးထွက်သံယိုမှုပိုမိုများပြားလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောကြောင့် သေစေလောက်သောခြိမ်းခြောက်မှုကို ရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါသည်။ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် ဆန္ဒပြသူများအား ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခြင်း၊ ရာဘာကျည်ဆန်များအသုံးပြခြင်းနှင့်နာကျင်စေအောင်ရိုက်နှက်မှုများကို အသုံးပြု၍ ဆန္ဒပြမှုများကိုနှိမ်နင်းခဲ့ကြပါသည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့နေသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက်စစ်အစိုးရကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကဲ့သို့သော neoliberal မူဝါဒများကိုအားဖြည့်ရန်အတွက်အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့် ကြီးမားသောမြေယာ သိမ်းဆည်းမှုများအား ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ
PCFS သည် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းဗဟုသုတမျှဝေခြင်း၊ မြေယာဥပဒေများမှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသားမြေဥပဒေကိုရေးဆွဲခြင်းကဲ့သို့သောလူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်း ဦး ဆောင်သည့်မူဝါဒဆိုင်ရာအားထုတ်မှုများကိုစစ်တပ်မှဖြုတ်ချလိမ့်မည်ဟုလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများမှလယ်သမားများအခွင့်အရေး” အာဏာသိမ်းမှုသည်မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်သွားနှင့်လက်သည်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည့်ဤမူဝါဒများနှင့်ဒီမိုကရေစီနေရာများကိုတိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်နယ်၏ဖက်ဆစ်ဝါဒသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ သို့သော်ပြည်သူလူထု၏မြေယာနှင့်ဘဝအခွင့်အရေးများကို ခုခံကာကွယ်ရန်ခုခံမှုများတိုးများလာသည်။ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောဖက်ဆစ်အစိုးရများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရသောပြည်သူလူထု၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြန်မာပြည်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသကြပါစို့။
Previous The battle for direction of our food systems Next PCFS to UNHRC: hold Myanmar military junta accountable for bloody protest crackdown
One reply to “Defy the military junta and defeat its fascist rule! Stand with the Burmese peoples! | အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံပြီးယင်းတို့၏ဖက်စစ်ဥပဒေများကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်သည်။မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူအတူရပ်တည်သွားမည်။”
PCFS to UNHRC: hold Myanmar military junta accountable for bloody protest crackdown – People's Coalition on Food Sovereignty says:
[…] The PCFS official also reiterated the Coalition’s call to stand with the Burmese peoples. […]